Ogaden News Agency (ONA) – WAR DAG DAG AH – CWXO oo dagaal xirfadaysan ku qaaday gudaha magaalada Jigjiga
WAR DAG DAG AH – CWXO oo dagaal xirfadaysan ku qaaday gudaha magaalada Jigjiga
Posted by ONA Admin	/ December 10, 2011
Cutub ka tirsan ciidanka jwxo qaybta Gorgor oo aad u hubaysnaa ayaa habeenkii Isniinta ahayd ee Taariikhdu ku beegnayd 05 Dec.2011 dagaal ka dhex bilaabay gudaha magaalada Jigjiga, dagaalkaas oo argagax weyn ku riday ciidamada gumaysiga Itoobiya iyo wakiiladiisa Ogadenya ayaa kasoo bilowday meesha la yidhaahdo Sheekh Cali Guure oo dhanka koonfur kaga beegan magaalada Jigjiga kadibna la isla soo galay gudaha magaalada.
Dagaalka oo ahaa mid si xirfad dagaal ku jirto lo osoo qorsheeyey ayaa biloowday fiidkii wuxuuna si aad ah ugu fiday xaafada ABLEELAHA ee magaalada Jigjiga, iyadoo ay adkaatay in dhinacna looga saaro magaalada waxayna rasaastu is daba maraysay muddo ilaa markii dambe ciidamo gurmad ahi ay yimadaan goobta. Khasaara xoogan oo soo gaadhay cadawga ayaa si faahfaahsan u cadayn balse wariyaha ONA uga soo warama magalada Jigjiga ayaa sheegay inay dhimasho iyo dhaawac xoogan soo gaadhay gumaysiga, dadkana laga qarinyay inay wax ka ogaadaan.
Shacabka dagan xaafada uu dagaalku ka qarxay ee ABLEELAHA ayaa habeenkii oo dhan la seexan waayey walwal iyo sawaxanka hubka la is weydaarsanayay, waxayna cadeeyeen aroornimadii in ciidamadii Jwxo ee dagaalka kusoo qaaday magaalada Jigjiga ay si nabad galyo ah kaga baxeen. Maamulka dabaqoodhiga ah e Jigjiga iyo ciidamada gumaysiga ee ku sugan Jigjiga ayay wareer weyn iyo cabsi xoogani ku keentay weerarkan ay ONLF ku soo qaaday Jigjiga iyadoo suuqyada iyo meelaha dadku iskugu yimaado dhowrkii maalmood ee u dambaysay ay hadal hayntu ahayd sida kalsoonida leh ee ay cutubyada CWXO dagaalka ugu soo qaadeen halkii xarunta iyo xamaamka u ahayd wakiilada iyo dabaqoodhiyiinta gumaysig. Sida uu noogu soo waramay wariyaha ONA ee Jigjiga labadii qof ee meel istaagtaba waxa ugu weyn uguna xiisaha badan ee ay ka hadlayeen ayaa ahayd dagaalkaas jigjiga ka dhacay habeenimadii Isniinta.
Khadadka isgaadhsiinta ee telefonada iyo internet kaba ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay hawada laga saaray si aan loo maqlin loona tabinin dagaalkaas ka dhex qarxay gudaha magaalada Jigjiga 05-Dec.2011. Dhanka kale waxaa dagaalkan loo xidhxidhay dad shacab ah oo kor u dhaafaya 60 qof una badan dadka dagan aaga uu dagaalku kasoo bilowday, xaafada uu kusoo fiday iyo qabaleeyaha aagagaas ku yaala. Xaalada magaalada Jigjiga ayaa xalay caadi kusoo noqotay kadib markay dhowrkii habeen ee u dambaysay bandow ahayd.